FAQs - Saxnimada QY
S: Sida Loo Helo Xigasho?
A: Si naxariis leh noogu soo dir sawirka alaabtaada, fadlan. Oo ay ku jiraan faahfaahinta sida hoos ku qoran:
b. Dhamaystir dusha sare
Haddii aad xal ugu baahan tahay codsigaaga, si naxariis leh noogu soo dir shuruudahaaga faahfaahsan, waxaanan yeelan doonaa injineero ku adeegaya.
S: Sidee buu u shaqeeyaa Habka lacag-bixintu?
J: Shuruudaha lacag-bixinta ayaa noo dabacsan. Waxaan aqbali karnaa hab lacag-bixineed oo kala duwan.
S: Sideen Ku Ogaa Wax Soo Saarka?
J: Waxaan labanlaaban doonaa xaqiijinta shuruudahaaga waxaanan kuu soo diri muunada ka hor inta aan la samayn wax soo saarka tirada badan sida aad u baahan tahay. Inta lagu jiro wax soo saarka ballaaran,
S: Sideen ku ogaan karaa keenista?
J: Ka hor inta aan la soo dejin waxaan kuu xaqiijin doonaa dhammaan faahfaahinta oo ay ku jiraan CI iyo arrimaha kale ee dareenka. Ka dib markab, waxaanu ku ogaysiin doonaa lambarka raadraaca oo aanu ku sii wadno cusboonaysiinta macluumaadka ugu dambeeyay ee adiga.
S: Maxaad Ku Samayn Doontaa Iibka Ka Dib?
J: Waanu daba gal ku samayn doonaa oo sugi doonaa jawaab celintaada. Su'aal kasta oo la xidhiidha qaybahayaga birta ah, injineeradayada khibradda leh ayaa diyaar u ah inay caawiyaan. Ku soo dhawoow inaad la xidhiidho wixii taageero ah ee codsigaaga kale xataa haddii aanay xidhiidh la lahayn alaabtayada.
S: Ilaa intee ayay jirtaa wakhtiga keenistaada?
A: Sida caadiga ah, 7-10days ee muunad, ka dibna 15-20 maalmood wax soo saarka mass.
S: Ma aqbashay amar yar?
J: Haa, waan samaynaa.
S: Waa maxay adeegga dheeraadka ah ee aad bixin karto?
A: Ma aha oo kaliya mashiinnada qaybaha, waxaan sidoo kale samayn kartaa dusha sare dhammeeyey, sida anodizing, dahaadhay, daahan budo, rinji iwm sidoo kale ururin qaybaha haddii loo baahdo.
S: Sawiradayda ma noqon doonaan kuwo badbaado leh ka dib markaan kuu soo diro?
J: Haa, si fiican ayaanu u ilaalin doonaa oo cid saddexaad looma siidayn doono ogolaanshahaaga la'aanteed.
S:10. Suurtagal ma tahay in la ogaado sida ay alaabtaydu u socdaan aniga oo aan booqan shirkaddaada?
J: Waxaanu bixin doonaa jadwal wax soo saar oo faahfaahsan waxaanan soo diri doonaa warbixin todobaadle ah oo wata sawiro ama muuqaalo muujinaya horumarka mishiinada. Waxaan sidoo kale kuu soo diri doonaa baakad faahfaahsan si aan kuu ogeysiino in dhammaan ay xaaladdoodu wanaagsan tahay.